11 Barnaamijyada Muusikada ee Bilaashka ah Xayeysiis La'aan | 2022 Liiska
Bogga ugu weyn 11 Barnaamijyada Muusikada ee Bilaashka ah Xayeysiis La'aan | 2022 Liiska
Muusiggu waa nolol iyo oh! Waad ku mahadsan tahay barnaamijyo badan oo suurtogal ka dhigaya qulqulka muusikada iyada oo aan la kulmin mashaakilka Xayeysiisyada soo galaya inta u dhexeysa dhegeysigaaga gaar ahaan marka barnaamijyadu bilaash yihiin.
Hal shay oo cajiib ah oo ku saabsan qulqulka bilaashka ah ee runtii taagan ayaa ah inaadan u baahnayn inaad ku bixiso dakhligaaga iibsashada albumka oo dhan.
Mar labaad, dhegeysiga muusigga iyada oo la adeegsanayo barnaamijyadan bilaashka ah waxay kugu qaadaysaa waddada daahfurka halkaas oo aad ka maqasho heeso cusub oo aan lagu dhejin raadiyaha. Waxaan ula jeedaa, kan aan doonayn inuu ka boodo xayeysiisyada kooban oo uu muusikada ku dhageysto lacag la'aan.
Sidee ayay u shaqeeyaan Barnaamijyada Muusikada Bilaashka ah?
Waa Maxay Faa'iidooyinka Isticmaalka Barnaamijyada Muusikada ee Bilaashka ah Xayeysiis la'aan?
11ka Apps ee ugu Fiican Muusiga Bilaashka ah ee Bilaashka ah
#1 Muusigga Google Play
#2 Muusikada Prime Amazon
Barnaamijyada bilaashka ah waxaa badanaa lagu yaqaanaa is -weydaarsiyo yar iyo lacag la'aan barnaamijyada muusikada, kuwan soo socdaa waa xannibaadyo aad filan karto:
Ma ciyaari karo muusigga oo go'ay (tusaale ahaan qaabka duulimaadka)
Codsiyada qaarkood ma taageeraan gelitaanka biraawsarka internetka (tusaale ahaan PC ama PC)
Tiro hore loo cayimay ayaa boodaysa saacad kasta ama maalin kasta
Waa in la daawado ama la jaanqaado dallacaadaha isdaba jooga ah
Sababta aasaasiga ah ee ka dambeysa sababta aad ugu gudbi karto qorshe gaar ah ayaa ah inaad ka mahadceliso ku-xirnaanshaha xayeysiis la'aanta ah iyo boodbooyin aan xad lahayn. Waxa kale oo macquul ah in la soo dejiyo liis -dheel si loogu dhejiyo muusikada markii aadan ku xirnayn internetka.
Haddii aad si joogto ah ula jaanqaado muusig hal cod oo muusig ah, u guuridda nidaam gaar ah ayaa mudan kara kharashka.
Inta badan codsiyada muusikada ee lacagta badan waxay bixiyaan waqti firaaqo ah si loo tijaabiyo, hase yeeshe, waxaad tijaabin kartaa arjiga bilaashka ah marka hore si aad u hubiso inaad jeceshahay fududeynta adeegsiga iyo go'aaminta laxanka.
XIDHIIDHKA: 15-kii heshiis ee ugu fiicnaa Apple Watch ee 2022
Baadhid; Siyaabaha Sharciga ah ee Lacag Loogu Helo Dhageysiga Muusikada
Waxaa jira dhowr sababood oo aad u adeegsan karto barnaamijyada muusikada ee aan xayeysiiska lahayn oo aadan waligaa bixin adeeg la casriyeeyay. Waxay kala yihiin:
Xayeysiisyada yaryar ayaa jaba
Heesta heesaha ka weyn
Liisaska la -waafajin karo
Waxaad marin u heli kartaa heesaha iyo fiidyowyada muusikada waqti isku mid ah.
Inta badan adeegsadayaasha taleefanka Android waxay la jaanqaadaan barnaamijka Google Play halkaas oo aad ku dari karto heeso aad u badan liiskaaga. Sidoo kale, waxaad naftaada ku dhex geli kartaa astaamaha kala -soocidda meesha aad ku garaaci karto Jamz bilaash ah si aad ugu raaxaysato.
Asal ahaan, dukaanka app ee Google Play wuxuu bixiyaa noocyo kala duwan oo muusik ah oo degdeg ah kuwaas oo bilaash ah oo diyaar u ah soo dejinta. Waa mid ka mid ah barnaamijyada muusiga bilaashka ah ee ugu wanaagsan ee aan lahayn xayeysiis gudaha 2022.
Qofka qaba Amazon Ra'iisul xubinnimada, waxaad ku raaxeysan kartaa qulqulka muusikada xayeysiis-la'aanta ah.
Qorshaha Muusiga ee Prime, waxaad heli kartaa ilaa laba milyan oo hees taaso ah faa'iidooyin ku filan waayo aragnimada muusiga ee bilaa xayeysiiska ah. Si aad ugu raaxaysato daawashada muusiga bilaashka ah ee teleefankaaga, soo deji app-kan muusiga.
Qodobka la xiriira: 20 Siyaabood oo Lacag looga Helo Muusikada
Barnaamijkan muusigga ee xayeysiinta-bilaashka ah wuxuu ku siinayaa isku-darka keli-keli iyo Mixtapes-kii ugu horreeyay ee aad dhegeysan karto. Tani dhab ahaantii way kala duwan tahay barnaamij muusig oo bilaash ah.
Markaa, waxaad samayn kartaa liisaska-ciyaareedkaada oo sidoo kale waxaad la wadaagi kartaa asxaabta sidoo kale. Waa mid ka mid ah barnaamijyada muusiga bilaashka ah ee ugu wanaagsan ee aan lahayn xayeysiis gudaha 2022.
XIDHIIDHKA: 10 Goobood oo Lagu Iibsado Kaarka Hadiyada Online Iyadoo la hubinayo Account
Iyadoo apps-yada kale ee aan xayaysiiska lahayn ay kuu ogolaanayaan inaad ku shubto liiska aan dhamaadka lahayn ee ururinta lacag la'aan, Slicethepie waxay ku siinaysaa dib u eegista muusikada.
Inta badan heesaha aad halkan ku aragto waxay u badan tahay inay yihiin fanaaniinta soo socda taasina waa habka ugu habboon ee lagu ogaan karo heeso cusub. Waxay bixisaa muusig bilaash ah wax xayeysiis ah waxayna kuu ogolaaneysaa inaad ku raaxaysato muusikadaada adigoon jabin gudbinta.
Haddii aad sidoo kale bixiso warcelin ku saabsan sumcadaha macaamiisha, waa lagu siin karaa lacag. Waxaad sidoo kale fursad u leedahay inaad kasbato kaash gunno ah!
Kani waa barnaamij kale oo xayaysiis bilaash ah oo bixiya fayl heeseed balaadhan. Si ka duwan apps music kale, app this bixisaa in ka badan 53 million heeso kuwaas oo aan xayeysiis ah.
Markay tahay Deezer, waxaad xaqiijineysaa inaad shaqsiyeysato liistadaada ciyaarta waxaadna heli kartaa fursad qaas ah oo aad ku ballansato wareysiga fannaaniinta soo socda.
App-kan muusiga ee bilaashka ah, waxaad ku raaxaysan kartaa sifooyinka TuneIn ee premium, laakiin haddii aad rabto inaad kulan waraysi la yeelato fanaaniinta aad jeceshahay, waxaad u baahan doontaa inaad u cusboonaysiiso nooca abka ah.
App-kan muusiga bilaashka ah ee bilaa xayeysiisku wuxuu u adeegaa sidii beddelka ugu habboon ee Spotify. On Pandora, waxaad ku shubi kartaa muusikada liis dheer.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka isticmaalka barnaamijkan muusigga pandora waa inaadan lacag bixin si aad u dhageysato muusikada. Mar labaad, waxaa jira laba adeeg oo bishiiba la bixiyo oo la yiraahdo Pandora Plus ($ 4.99) iyo Pandora Premium ($ 9.99).
Qorshayaashan, waxaad ku dhageysan kartaa muusig badan oo aan xayeysiis lahayn iyo sidoo kale khad offline.
Spotify oo ah abka muusiga ee xayeysiis la'aanta ah ayaa dib u abuura liiskaaga heesaha si uu u keeno dariiqaaga heesaha ugu caansan.
Fursadaha kale ee aad ku raaxaysan karto waa:
Akhrinta heesaha heesta gudaha app -ka
Baro xulashada heesaha dhawaa toddobaad kasta
XIDHIIDHKA: 10 Dukaan ee ugu Fiican Online -ka ee 2022
Sidee Fanaaniintu Lacag uga Helaan Spotify? Tusaha Khubarada
Mid ka mid ah sababaha asaasiga ah ee uu Jango u soo bandhigo qulqulka muusikada xayeysiis la'aanta ah ayaa ah joogitaanka baaxadda weyn ee fannaaniinta madaxa bannaan.
Si aad si joogto ah ugu raaxaysato qulqulka xayeysiis la'aanta ah, Jango wuxuu kaa codsanayaa inaad hoos u dhigto warcelinta. Ma ogtahay inaad ka heli karto heesaha qoran ee app -ka?
Tani waxay u badan tahay inay tahay barnaamijkii muusigga ugu fiicnaa ee aad abid yeelan karto. Qeybta ugu xiisaha badan ayaa ah inaad xitaa qulquli karto adigoon sameysan xisaab.
Haddii aad jeceshahay muusiga qadiimiga ah, markaa, Idagio waa inuu kugu habboon yahay. Waxay la socotaa qalab aad u fiican oo la jaan qaadaya waxay bixiso.
Adigoo isticmaalaya shaqada, orkestra, soloist, laxanka, iwm, waxaad shaandheyn kartaa dalabka toddobaadlaha ah si ay kuu keento isku-dheellitiran oo qeexan oo ah muusig cusub iyo mid caan ah labadaba. Waa mid ka mid ah ku darista barnaamijyada muusiga bilaashka ah ee 2022.
Audiomack wuxuu ku siinayaa wax kabadan hal milyan oo adeegyo qulqul ah si uu kuu helo heesaha ugu dambeeyay ee hip-hop, rap, Afropop, reggae, iyo EDM.
Waxa kaliya ee lagaa rabo waa inaad is -qorto oo waxaad samayn doontaa xulashada fannaaniinta aad rabto inaad dhagaysato. Markaas, waxaad heli kartaa liisaskooda.
Barnaamijkan muusigga ee xayeysiiska-bilaashka ah ayaa loo heli karaa adeegsadayaasha Android iyo macruufka labadaba.
Asal ahaan, kuwani waa barnaamijyada muusikada ugu fiican oo isku mar ka xor ah xayeysiisyo halkaas oo aad ku dhegeysan karto muusigga ugu wanaagsan abid. Waxaad lahaan kartaa dhowr qalab oo aad dhageysan kartaa liis dheer oo muusig ah.
15 Apps oo kale ah sida qaladka ah oo lacag caddaan ah si fududly | Lacag degdeg ah
15 Website -ka Ugu Fiican Si Aad U Daawato Filimaanta Masraxyada
Sida Loo Sameeyo Magaca Domain ee Mareegtaada
10+ Caymiska Kiraystayaasha Ugu Fiican California | 2022 Liiska
10 ka Dheemman ee ugu Qaalisan Adduunka 2022
Dheemmanku waxay leeyihiin hab ay ku wajahaan raaxaysiga xarrago leh dadka awoodi kara inay hantiyaan. Kuwaas…
16-ka Doollar ee ugu Qaalisan Adduunka
Violin-kii ugu horreeyay adduunka ayaa la sameeyay dhawaan iyada oo dadka adduunka oo dhan ay la yaaban yihiin haddii ay jiraan qaar badan…
20 SUV -yada ugu Qiimaha Badan 2022 | Mileage, Qiimaha & Qiimaynta
Helitaanka SUV la isku halayn karo oo la awoodi karo oo qiimihiisu ka yar yahay $10,000 waa hawl adag, laakiin ma aha wax aan suurtagal ahayn.
10ka Kaarka MTG ee ugu Qaalisan: Kaararka Ururinta
Sida ciyaarta kaararka ganacsiga ugu dhaqsaha badan adduunka. Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in Sixirka: Isu imaatinka uu leeyahay wax weyn…
Dib -u -eegista Niilka Buluuga 2022: Niilka Buluug ma sharcibaa? Runtii ma jaban yihiin?
Niilka Buluuga ah ma sharci baa? Haa way tahay. Haddii aad raadinayso meel aad wax ka iibsatid si aad ula qabsato…
21 Kayd ee ugu Wanaagsan ee Joogtada Doolarka ah 2022
Kaydka Penny ee aaladaha sida Robinhood ayaa ku sii socda inay ku koraan suuqa saamiyada. Waxaan jeclahay inaan sheego…